Musharraxoow qabashada kursi QARAN qabanqaabo QABIILI ah kuma qaabsama | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Musharraxoow qabashada kursi QARAN qabanqaabo QABIILI ah kuma qaabsama
Musharraxoow qabashada kursi QARAN qabanqaabo QABIILI ah kuma qaabsama
(Hadalsame) 13 Maajo 2022 – HANKAAGU REER HEBEL HA DHAAFO!
Dalka Singapore hillaaddii 1965-kii waxa uu ka mid ahaa dalalka loo yaqaan DUNiDA SADDEXAAD ee SABOOLKA ah, waxa uu dhinaca GDP-ga kala sinnaa Tanzania.
Kishore Mahbubani oo ah Diblomaasi sare iyo aqoonyahan u dhashay dalka Singapore ayaa ka sheekeeyey sida isaga oo arday xanaano ah (1965) iyo hadda oo uu yahay Diblomaasi rugcadaa ah dalkiisa uga soo kacay Dunida Saddexaad oo uu uga mid noqday Dunida Kowaad!
Wareysi uu bixiyey ayuu uga faallooday sida Madaxweynihii dalkaas horumarkiisa bud dhigaha u ahaa ee Lee Kuan Yew ula dagaalamay musuq maasuqa.
Waxa uu sheegay in Mr. Lee adeegsaday wax uu ugu yeeray M.P.H oo ah ereyo Ingiriisi ah oo laga soo gaabiyey Meritocracy, Pragmatism iyo Honest.
Meritocracy waxa loola jeedaa in shaqada loo dhiibo qofka ugu mudan ee aqoonteeda iyo kartideeda leh, Pragmatism oo iyaduna ku saabsan in la adeegsado waxa markaa la jaan qaadaya xaaladda dalka iyo dadka! Tusaale, nidaamka dhaqaale ee Hanti goosaska iyo Hantiwadaagga ee ay ku kala dhaqmayeen labadii isbahaysi ee reer Galbeedka iyo Midowga Soofiyeeti, Mr. Lee Kuan Yew waxa uu mid walba ka qaatay waxa u shaqeynaya, waxaa hal ku dhig u ahaa ‘No matter whether the Cat is white or black if its catches the mouse’ – macno ma leh in Bisasdu madow dahay iyo ay caddahay mar haddii ay qabaneyso Jiirka!
Hadaba, waa ereyga daacadnimo (honest) dulucda qormadeyda.
Mr. Mahbubani waxa uu ereyga Honest ku sheegay midka ugu adag in la dhaqangaliyo! Hoggaanka dalka waa in ay ka run sheegaan hab dhaqankooda! Tusaale, dalalka Dunida Saddexaad marka ay sheegayaan in ay la dagaalamayaan Musuqa, waxa ay xir xiraan dadka hoose sida agaasimeyaasha iyo kuwa ka sii hooseeya! Arki meysid Wasiir maxkamad loo soo taagay musuq maasuq!
Sida uu sheegay Mahbubani isaga oo hoga tusaaleynaha heerka uu Mr. Lee ka joogay ka run sheegidda (Honest) dagaalka uu ku cirib tirayey Mushqa ayuu tibaaxay in nin Wasiir kuxigeen ka ahaa Wasaaradda Maaliyadda ee Singapore dalxiis u raacay nin ganacsade ahaa, Wasiirka qarashka ku baxay waxaa dabaray ganacsadaha.
Markii uu soo laabtay, Mr. Lee Kuan Yew waxa uu ka qaaday xilkii, xabsigana waa loo taxaabay.
Wasiirka oo ku andacooday in uusan lacagta dowladda adeegsan ayaa loo sheegay in ganacsade wax ka bixiyo ay tahay Musuq Maasuq wayn oo keenaya inuu isna hadhoow ganacsadaha ugu ixsaamo qaab tooxsi ah.
H.E Said Abdullahi Deni iyo Abdirahman Abdishakur Warsame
Deni waxaa u tanaasulay sida aan xogta ku hayyo siyaasiyiin badan oo reerkiisa ah sida Cumar Candirashiid, ma hubo in ganacsatada Majeerteen dhaqaalo ol’ole siiyeen!
Sida aan faaladdii galabta ku sheegay, arrinta hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir waa bannaan yaal, ganacsatada Habar Gidir ayaa dhaqaale ol’ole siiyey, Abdikarim Hussein Guled ayaa si reernimo ah ugu tanaasulay.
Dabcan, ma lihi Deni iyo Cabdiraxmaan ayey arrintan gaar u tahay, yeelkeede, mas’uul doonaya xil Qaran ma habboon tahay in uu YAA REER HEBELEEY wax ku raadiyo? Ma Yaa Soomaali ahey ayuu ka quustay?
Berri ganacsadaha reer Guriceel iyo midka Buur Hakaba dowladda Cabdiraxmaan maka sinnaan doonaan?
Aniga iyo wiilka Habar Gidir isku si Madaxweyne ma noogu noqon karaa Cabdiraxmaan?
Deni oo isna sidaas ah, iyo kuwo kale oo aan bannaaka la iman waa isla noocaas.
Maxaan si gaar ah Cabdiraxmaan tusaale ugu soo qaatay?
Aniga oo xusay in uu kaligii arrintan ku ahayn, hadana, waxaa ceeb ah in qabiilka la ood jabiyo (Polorization), saxaafadda lala yimaaddo ganacsato reer hebel ah iyo reer Qansax ayaa dowlad dhisanaya!
Ma musuq maasuq ka wayn aya jjra ganacsato beel ah oo rabta in ay qaran u doorato Madaxwayne haybtooda ah?!
Previous articleRuushka oo sheegay inuu xal u hayo walaac caalamka ka taagan kuna digtey reer Galbeedka
Next article”May hubkaa ma siinayno!” – Maraykanka oo Ukraine uga dhaartay hub istaraatiji ah oo ay ka filayeen balse bixiyey jawaab tuhun kale gelinaysa Ruushka